Ayaa Ka Jawaabaya Daraasaddaada? Ansaxinta oo Fudud Laga Dhigay | Martech Zone
Ayaa Ka Jawaabaya Daraasaddaada? Xaqiijinta oo Fudud laga dhigay
Isniin, Maarso 26, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Hanna Johnson
Codsashada jawaab celinta macaamiisha kahor, inta lagu gudajiray, iyo kadib bilaabista ganacsi cusub waa hab fiican oo lagu ogaado sida aad ugu cabirto indhaha macaamiishaada. Marna ma doonaysid inaad ka fikirto inaad ogtahay sida suuqa aad bartilmaameedka u tahay (30 ilaa 45 sano hooyooyinka shaqeeya, tusaale ahaan) ay dareemayaan waxa aad sameyneyso, gaar ahaan maadaama ay fududahay inaad adigu isweydiiso. Warka wanaagsan ee ganacsatada, ha ahaato inaad ka shaqeyso shirkad weyn ama bilow yar, waa inay jiraan dhowr qalab oo la heli karo si ay kaaga caawiyaan hawsha inaad gaarto sahaminta suuqaaga bartilmaameedka, iyadoo aan loo eegin miisaaniyaddaada ama heerkaaga khibrad leh.
Soo dir an sahanka khadka tooska ah inaad waxbadan ka barato macaamiishaada, sida ay u dareemayaan badeecadaada cusub, waxa ay jeclaan lahaayeen inay mustaqbalka kaa arkaan, iyo fariinta noocee ah ee ugu saameynta badan iyaga. Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad si toos ah u kormeerto macaamiishaada, ama waxaad u mari kartaa shirkad dhinac saddexaad ah si aad u iibsato fikradaha jawaabeyaasha aad bartilmaameedsato. At SurveyMonkey, waxaan bixinaa Baahi Dhagaystayaasha Daanyeerka inaan kugula xiriiro macaamiisha iyo daneeyayaasha aad jeclaan laheyd inaad la xiriirto.
Laakiin ka waran haddii jawaab bixiyahaaga jawaabta ah, oo sheegaya inay tahay 35 jir reer Mexico ah oo reer Mexico ah kana shaqaysa warshadaha daryeelka caafimaadka isla markaana leh 2 caruur ah, runtiina waa 18 jir cadaan ah, makaanik shaqo la’aan ah oo la yiraahdo Frank? Go'aanka aad ku gaarto natiijooyinka ka soo baxa sahamintaada qanacsanaanta macmiilka ayaa kaliya lagu kalsoonaan karaa sida macluumaadka aad ka hayso dadka daraasaddaada qaadaya.
At SurveyMonkey, waxaan haynaa koox dhan oo ka shaqeyneysa sidii loo ogaan lahaa dariiqooyinka ugu wanaagsan ee lagu xaqiijin karo aqoonsiga ka qeyb galayaasha sahanka. The Kooxda TrueSample ayaa ka shaqeynaya RealCheck Boostada iyo RealCheck Bulshada, xalalka lagu hubiyo aqoonsiga jawaabeyaasha sahanka iyadoo loo marayo magacyadooda iyo cinwaankooda iyo cinwaanka emaylka, siday u kala horreeyaan. Qaabkan laba-gacmood ah ee ku saabsan ansaxinta jawaabe jawaabe ayaa loola jeedaa in lagu xaqiijiyo aqoonsiga xitaa adag tahay in la ansaxiyo jawaab bixiyaasha, sida 18 ilaa 24 sano jir (waa ka xumahay Frank).
Waxaan sidoo kale leenahay Dr. Phil iyo kooxdiisa hababka sahanka kuwaas oo ka shaqeynaya sidii loo aqoonsan lahaa kuwa qanciya ee naxdinta leh, dadka ku degdegaya baaritaankaaga iyaga oo aan siinin waqtiga iyo dareenka ay mudan tahay. Habka Dr. Phil wuxuu ku tiirsan yahay Galitaanka Bayesian, hab loo aqoonsado kuwa aan macquul ahayn (jawaabe oo tilmaamaya inuu yahay nin, tusaale ahaan, ka dibna su'aal dambe oo uu kaga jawaabayo "haa," runti inuu uur leeyahay 3-dii sano ee ugu dambeysay).
Xaqiijinta aqoonsiga jawaabeyaasha sahanku waa farshaxan iyo saynis labadaba, laakiin warka wanaagsan ayaa ah inaadan kali ku aheyn raadintaada jawaabayaasha ugufiican uguna kalsoonida badan. Waxaa jira dad aad u caqli badan oo rogaya oo jeedinaya habeenkii, oo aan awoodin inay seexdaan iyagoo ka fakaraya habka ugu wanaagsan ee laguugu ansaxin karo jawaabeyaashaada adiga. Dhab ahaan. Sababtoo ah kafiican, jawaabeyaasha sahan ee la ansaxiyay waxay ka dhigan yihiin natiijooyin sahan oo lagu kalsoonaan karo. Natiijooyinka sahanka ee la isku halleyn karo waxay ka dhigan yihiin go'aanno wanaagsan oo ku saleysan natiijooyinkaas. Go'aan qaadashada fiicani waxay kaa dhigeysaa mid wanaagsan, taas oo naga dhigeysa inaan fiicanahay. Qof walba wuu guuleystaa. Marka laga reebo Frank.
Tags: RealCheck BoostadaRealCheck Bulshadajawaabe jawaabtaSurveyMonkeyTusaalooyinka Trueansixin
Hanna waxay u tahay Suuq-geynta Warbaahinta Bulshada SurveyMonkey. Jacaylka ay u qabto wax kasta oo bulsheed waxay si fiican u dhaafaysaa durdurkeeda Tweet. Waxay jeceshahay dadka, saacad faraxsan, iyo ciyaar isboorti oo wanaagsan. Waxay u safartay qaarad kasta marka laga reebo Antarctica, laakiin waxay ka shaqeyneysaa taas ...
Midabada Calaamadaha Shabakada
Isticmaalka Pinterest si aad uga qayb gasho isticmaaleyaasha iyo kobcinta SEO
Feb 19, 2016 markay ahayd 12:37 PM
Waa salaaman tahay Hana, ma jiraan wax stats ah oo la heli karo oo xaqiijinaya sahaminta SurveyMonkey si ay u noqoto mid la isku halleyn karo oo ansax ah? Waxaan rabaa inaan u isticmaalo mashruuc cilmi baaris waana inaan cadeeyaa ansaxnimada iyo kalsoonida.